Mata oo shaaca ka qaaday wadada kaliya ay Manchester United kaga guuleysan karto Liverpool – Gool FM
(Manchester) 17 Okt 2019. Xiddiga khadka dhexe reer Spain iyo Manchester United ee Juan Mata ayaa ku dhiiri galiyay saaxiibadiis kooxda in kulanka adag soo aadan ay la ciyaari doonaan Liverpool ay u ciyaaraan si miyir qab leh si ay guul u gaaraan, isagoo dhinaca kale carabka ku adkeeyay inay ku faraxsan yihiin kulankaan.
Red Divals ayaa xilli ciyaareedkan ku bilaabatay qaab niyadjab ah, kaddib markii ay guul gaareen 2 kulan oo kaliya, iyagoo haatan dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League kaga jira kaalinta 12-aad, waxayna ka heleen kulamadii ay ka soo ciyaareen 9 dhibcood oo kaliya, waxayna 2 dhibcood oo kaliya u jiraan kooxda Everton oo fadhida boosaska loogu laabto horyaalka First Division.
Kooxda uu hogaamiyo tababare Ole gunnar solskjaer ayaa kulankooda ugu dambeeyay waxay guuldaro ka soo gaartay kooxda Newcastle United, laakiin maamulka Red Divals ayaa dib u soo cusbooneysiiyay kalsoonidii ay ku qabeen macalinka reer Norwey.
Haddaba Xiddiga khadka dhexe reer Spain iyo kooxda Manchester United ee Juan Mata ayaa wareysi uu bixiyay kahor ciyaarta la wada sugayo ee ka dhici doonto garoonka Old Trafford wuxuu ku sheegay:
“Maalinta Axada soo aadan waxaan heysanaa fursad weyn si aan u bedelno maskaxda kooxda, dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan guul gaarno, waxeynu nahay Manchester United, waxaana ku ciyaareynaa garoonkeena, waxaan soo bandhigi doonaa wax walba ee suurtogal ah si aan u guuleysano, sababtoo ah taageerayaasheena wey u qalmaan”.
“Warka ugu xun ee kulankan ayaa ah in David de Gea uusan diyaar u noqon doonin kulankan si uu kaga qeyb galo, sababa la xiriira dhaawac soo gaaray, laakiin waxaan rajeenayaa in dhaawaciisa uusan noqon doonin mid halis ah, isla markaana uu awood u yeelan doono in si dhaqsi ah uu noogu soo noqo”.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka kooxda Red Devils waxaa sare u sii qaaday warar sheegaya in qadka dhexe reer France ee Paul Pogba uusan diyaar u aheyn inuu ka qeyb galo kulanka Liverpool, waxayna arrintan dharbaaxo kale xoogan ay ku tahay tababare solskjaer.